Akanakisa Fossil smartwatches: Fossil Gen 5, Hybrid HR, uye zvimwe (Gumiguru 2020) - WebSetNet
By Martin6 | October 24, 2020
Fossil yagara ichigadzira wachi huru, asi kambani haina kutanga kupinda mu smartwatch mutambo kusvika makore mashoma apfuura. Pakutanga kutanga na hybrid smartwatches, Fossil yakazopedzisira yachinjika kuma smartwatches akazara anomhanya neGoogle Kupfeka OS chikuva. Muchokwadi, Fossil ndeimwe yemhando chete inochengeta Wear OS ichikwira mukutanga kwa2020. Ndicho chikonzero nei tiri kutenderedza akanakisa Fossil smartwatches iwe aunogona kutenga.
Fossil Boka, iyo mubereki kambani yemubereki Fossil, chaizvo ine yavo inozivikanwa zvigadzirwa zvekushandisa seSkagen neMisfit, uye marezinesi zvigadzirwa kubva kumakambani anosanganisira Puma, Emporio Armani, Diesel, Kate Spade, naMichael Kors. Mazhinji emawatchwatches emhando idzi anogovera iwo mamwe ma specs uye vanogamuchira zvigadziriso panguva imwe chete, ndosaka tichizosanganisira makambani aya pane edu runyorwa zvakare.
Akanakisa Fossil smartwatches
Cherechedza: Tichagadzirisa iyi runyorwa rweakanakisa Fossil smartwatches sezvo zvishandiso zvitsva zvaziviswa. Iyi posvo yakapedzisira kuvandudzwa Chikunguru 29, 2020, pasina shanduko huru kubva mumwedzi wapfuura.
Fossil Gen 5: Yakanakisa Fossil smartwatch
Kana iwe wakamboverenga zvinyorwa zvangu kare, unogona kuzvitaura neni: Iyo Zvisaririra Gen 5 ndiyo yakanakisa Fossil smartwatch yaunogona kutenga. Nguva. Iyo zvakare sarudzo yedu yeakanakisa Wear OS tarisa zvakazara.
Dhizaini yakagadzika, kuita kukuru, kuratidzwa kwakanaka, uye sarudzo dzakawanda dzemuvara zvinhu zvese zviri muFossil Gen 5 ichikwirisa runyorwa rwedu. Iyo zvakare ine bhatiri rinogara-refu nekuda kweFossil's tsika bhatiri modes, iyo yakabva yaita nzira yavo kune vese Qualcomm Snapdragon Pfeka 3100-powered smartwatches muFossil Boka mutsara.
Ive neshuwa yekutarisa Amazon nematengo emitengo. Mutengo wewachi unowanzoita $ 295, asi panguva yeKisimusi gore rapfuura inogona kuwanikwa pasi pemadhora mazana maviri.
The Skagen falster 3 inogadzirisa ese mashandiro uye bhatiri nyaya dzakatambudza iyo chekutanga piri Falster smartwatches. Iyo ine zvakangofanana zvakafanana specs seiyo Fossil Gen 5 (pamusoro), pamwe neayo akanakisa echinyakare mabhatiri modhi ayo anonyatsobatsira iyo kutora yakawanda seyakawanda bhatiri sezvinobvira. Iko zvakare kune yakavakirwa-mukati mutauri, kuti iwe ugone kunzwa Google Mubatsiri achitaura newe uye kupindura nhare zvakananga pawatch kuburikidza neBluetooth.
Chaizvoizvo, kunyangwe iwe uchifanira kutenga iyo Fossil Gen 5 kana Skagen Falster 3 zvinoenderana zvachose pane iyo dhizaini iwe yaunoda zvakanyanya. Iwo maficha, mashandiro, uye runako zvakanyanya zvimwe zvese zvakafanana pakati pemidziyo miviri. Nekudaro, iyo Skagen Falster 3 iri nyowani saka hatisati tamboiona ichidonha mutengo. Iwe ungatofanira kubhadhara zvishoma kune ino kubva kune vamwe vatengesi.
The Zvakasarudzika Mbeu dzakauchikwa HR ndicho chinhu chidiki pane smartwatchy pane yedu runyorwa. Inyanzvi smartwatch yehybrid, saka haina bato rechitatu-bato kuenderana, inboard mumhanzi rutsigiro, kana NFC yekubhadharisa mari. It anoita ive ne-e-ink yekuratidzira, senge yako yekare Pebble smartwatch. Izvi zvinobvumidza kuti igare kweanopfuura mavhiki maviri pane imwechete kubhadharisa. Inotaridzikawo yakanaka kunze.
Ini handikurudzire kutenga iyo Hybrid HR yehutano hwayo - ini ndawana iyo sensor yemoyo kukanganisa, uye hakuna GPS sarudzo pano (pabhodhi kana GPS yakabatana). Kurara uchiteedzera haina kunaka kana.
Nekudaro, ini ndinofunga iyo Fossil Hybrid HR ndeimwe yekutarisisa smartwatches unogona kutenga. Iyo e-ink skrini inoshamisa kwazvo kushandisa.
Uyewo verenga: Iwo akanyanya akasimba trackers aunogona kutenga
Kana iwe uri mushure meiyo Fossil Gen 5 asi uchida chimwe chinhu chidiki diki, usatarise mberi kupfuura iyo Zvisaririra Gen 5E. Inowanikwa mune 42 uye 44mm saizi, iyo Gen 5E smartwatches anozvirumbidza mazhinji akafanana Gen 5 maficha pa $ 250 chete.
Iyo Fossil Gen 5E ine yakafanana processor, yakaenzana RAM, tsika bhatiri modhi, yakavakirwa-mukati mutauri, uye NFC yeGoogle Pay seGen 5. Zvisinei, iyo Gen 5E ine diki diki kuratidza, 4GB yekuchengetera pane 8GB , uye iwe unongowana GPS yakabatana pane iyo yakavakirwa-mukati GPS. Zvakare, ine panyama panyama padivi, asi hazvitenderedze kupururudza kuburikidza Wear OS.
Ipo iyo Gen 5E ichirira senge smartwatch ine mutsindo, tinokurudzira kutenga iyo yakajairwa Gen 5 kana uchikwanisa kuiwana iri kutengeswa.
Uyewo verenga: Hezvino izvo zvatinoda kuona kubva kuFossil Gen 6
Michael Kors Lexington 2 naBradshaw 2
Michael Kors mafeni achada izvo zvitsva Lexington 2 uye Bradshaw 2 smartwatches. Yakaziviswa ku IFA 2019, aya maviri echinyakare smartwatches anounza chizvarwa cheFossil 5 kukwidziridzwa kune iyo Michael Kors brand. Izvi zvinoreva kuti ese ari maviri mawatch ane iyo Qualcomm Snapdragon 3100 SoC, 1GB ye RAM, mutauri wakavakirwa-mukati, uye tsika mabhatiri modhi senge Fossil Gen 5.
Iyo Lexington 2 inodhura kupfuura iyo Bradshaw 2, asi mashandiro anofanirwa kunge akafanana kune ese madhizaini.
Tarisa mitengo yeLexington 2
Tarisa mutengo weBradshaw 2
The Emporio Armani Smartwatch 3 inodhura, asi damn ndiyo yakanaka wachi. Iyo inoratidzira ese akafanana maficha senge Fossil's mamwe echishanu-chizvarwa mawatch, akazara nemutauri wekupindura mafoni uye kunzwa Google Mubatsiri anopindura. Iyo ine sportier, yakareruka dhizaini ichienzaniswa nedzimwe sarudzo pane yedu runyorwa. Iyo zvakare inouya mune imwe toni yeakasiyana mavara.
The itsva Dhiziri Fadelite ndeimwe yeangu andinofarira anotarisisa smartwatches enguva dzese. Iyo haina kana kutaridzika kunge smartwatch! Iyo inouya munzira ina dzemavara, asi iyo yakajeka (pamusoro) iri kure nekure kwandinoda. Kune zvakare yakajeka bhuruu, nhema, uye tsvuku mavara kana usiri kuchera zvese-zvakajeka kutaridzika.
Iyo Diesel Fadelite ine yazvino Snapdragon 3100 processor, asi chete 512GB ye RAM nepo vamwe vanokwikwidza Wear OS wachi vane 1GB ye RAM. Isu tawana akanakisa Wear OS vanoita vane 3100 SoC uye 1GB ye RAM, saka mashandiro anogona kunge iri nyaya. Hatina kuongorora Fadelite parizvino, zvakadaro, saka hatigone kuvimbisa mashandiro ayo kana hupenyu hwebhatiri.
Ndozvazviri kune yedu runyorwa rweakanakisa Fossil smartwatches. Pane chatakatadza here? Iwe une yako ipi yeaya madhizaini? Regai tizive mune zvakataurwa.
Skagen Falster 2 ongororo: Anoshamisira kugwinya shamwari
Skagen's Falster 3 smartwatch yemitambo maitiro ane maitiro, iyo Snapdragon Wear 3100, uye 1GB RAM
TicWatch Pro 2020 Ongororo - Inosimudzira iyo nyaya
Fossil inofumura nyowani Sport smartwatch
← Yekupedzisira Nongedzo kuAmazon Kushambadzira Heano ese makuru maficha eiyo nyowani Dell XPS 13 2-in-1 (vhidhiyo) →